Sunday November 13, 2016 - 12:29:34 in Wararka by Super Admin
Clinton ayaa guul darradeeda u sababeysay madaxa ugu sarreya hay’adda FBI-da Ninka lagu magacaabo James Comey.
Hillary Clinton oo la hadlaysay dadkii maalgelinayay Ol Olaheeda doorashada ayaa sheegtay in warkii kasoo baxay FBI-da maalmo ka hor intii aysan doorashadu dhicin uu dhaawac weyn u geystay mashruuceedii doorashada.
James Comey ayay ku eedaysay in uu dib saaxada siyaasadda ugeeyay murunka ku aaddan fariimihii Clinton ay ka dirtay Email-keeda khaaska ah xilligii ay aheyd wasiiradda arrimaha dibadda Mareykanka.
Agaasimaha FBI-da wali wax jawaab ah kama bixin eedaynta uga timid Clinton, malaayiin qof Mareykan ah ayaa layaabay sida lama filaanka ah ee uu doorashada ugu guuleystay Trump oo ah Nin ku caanbaxay cunsuriyad iyo islaam nacayb.
Dhinaca kale magaalooyinka waaweyn ee wadanka Mareykanka wali waxaa kasii socda dibad baxayo ballaaran oo loogasoo horjeedo madaxweynaha Cusub ee Mareykanka.
Boqolaal kun oo qof ayaa mudaaharaadyo ka dhigaya magaalooyinka New York, Washington iyo gobollada waaweyn ee wadankaasi, dadka iskusoo baxyada dhigaya ayaa ku qeylinaya erayo ka dhan ah Donal Trum madaxweynaha cusub ee wadanka Mareykanka.